2016 maapuro matema echishanu madhiri akaziviswa: $ 50 echipo makadhi nekutenga kweasina kuvhurwa iphones
Kuru Nhau & Ongororo 2016 Apple Black Chishanu madhiri akaratidzira: $ 50 makadhi echipo nekutenga kweasina kuvhurwa maPhones
2016 Apple Black Chishanu madhiri akaratidzira: $ 50 makadhi echipo nekutenga kweasina kuvhurwa maPhones
Apple yakazivisa madhiri ayo eChishanu eChishanu eChishanu uye ayo & maapos ese makadhi echipo: unogona kuwana $ 50 chipo kadhi nekutenga kweakasarudza akavhurwa maPhones uye anosvika kumadhora zana nemhando dzakasarudzwa dzePad. Iyo chibvumirano chiri kushanda nhasi chete uye iwe unogona kurova iyo Apple Chitoro izvozvi kuti uzvione iwe pachako.
Gore rino, vatakuri uye vatengesi vakaderedza mitengo paPhones zvakanyanya: T-Mobile yazvitangisa zvese nekupa mahara maPhones aine anokodzera kutengeserana-ins, uye AT&T neVerizon Wireless vatevera kupa zvibvumirano zvakafanana paiyo nyowani iPhones. Iwe unogona zvakare kuwana makadhi echipo anosvika kumadhora mazana maviri nemaviri paGood Buy nevamwe vatengesi.
Hapana chekuchengetedza pane yazvino iPhone 7 kana 7 Plus
Izvi zvinoita kuti ive nguva yakanakisa yegore yekutenga maPhones matsva: mwedzi miviri chete mushure mekuburitswa kwavo zviri pamutemo, michina yacho ichiri nyowani uye iwe wave nenguva yekuverenga dzese ongororo uye woita pfungwa dzako.
Pasina imwezve ado, heano ese ma2016 Apple Nhema Chishanu madhiri:
Apple Chipo Kadhi inosvika kumadhora makumi mashanu kana iwe ukatenga sarudza SIM-yemahara iPhone mamodheru nhasi
Apple Chipo Kadhi inosvika kumadhora zana kana iwe ukatenga sarudza iPad mamodheru nhasi
Apple Chipo Kadhi inosvika kumadhora makumi maviri nemashanu kana iwe ukatenga chero Apple Watch Series 1 modhi nhasi
Apple Chipo Kadhi inosvika kumadhora zana nemakumi mashanu paunotenga sarudza Mac makomputa nhasi
Apple Chipo Kadhi inosvika kumadhora makumi maviri nemashanu paunotenga Apple TV nhasi
Pane zvinhu zvishoma zvakakosha zvekucherechedza: HAPANA madhiri kana kuchengetedza pane iyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Apple iri kupa $ 25 kadhi rechipo nekutenga kweakavhurwa iPhone SE, uye $ 50 makadhi echipo nekutenga SIM-yemahara iPhone 6s kana 6s Plus. Uye heano maitiro emakadhi echipo anotsemuka ekutenga kwePadad: unowana $ 50 chipo kadhi yeiyo mini mini 4, $ 50 chipo kadhi yeiyo iPad Air 2, uye $ 100 kadhi yechipo yeiyo iPad Pro.
Kana iwe uchitsvaga Apple zvibvumirano, izvi zvechokwadi hazvisi zvakanakisa kutenderedza. Iwe unogona kutarisa kutenderera kwedu kwe:
Yakanakisa 2016 Nhema Chishanu madhiri eApple iPhone
Yakanakisa 2016 Nhema Chishanu madhiri eApple iPad
Uri kutora chigadzirwa chitsva cheApple maHoridhe aya here? Tizivisei mune zvakataurwa pazasi.
mabviro: Apple Nhema Chishanu Deals
samsung notibhuku 4 kuburitsa zuva
google ikozvino launcher wedzera screen
Red Dead Kununura 2 shamwari app ichavhurwa muna Gumiguru 26
HTC One (M8) yeWindows inogona kuwanikwa zvakare kubva kuSprint uye T-Mobile?
T-Mobile inogona kunge yakakunda iyo US 5G hondo pamberi peApple & apos; s iPhone 12 isati yaburitswa
Nyamavhuvhu 29th kugadzirisa kunouya kuSuper Mario Run kunounza hutsva hunhu, nyika nyowani uye 50% kubvisa dhiri